Waraysi Wasiir ku xigeenka amniga ee Somaliland - BBC News Somali
Waraysi Wasiir ku xigeenka amniga ee Somaliland
10 Agoosto 2015
Goob muran dhul uu ka dhacay oo wiil yar boliiska uu ku diley magaalada Hargays, aayaa wariyaha BBC uu ku soo waramay in xaaladdu haatan degantahay, inkstoo taayiro dadka xaafaddu ku gubeen wadada laamiga ah ee u baxda Gabiley gawaadhida dab-damisku bakhtiinayeen.
Boliis badan ayaa xaafaddaasi la geeyay. Labada xisbi ee mucaaradka ee ka jira Somaliland Waddani iyo UCID, ayaa cambaareeyay dilka wiilka yar oo 11 sano jirka ah ee boliisku xabadda madaxa kaga dhufteen.
Wasiir ku-xigeenka amniga ee Somaliland Cabdi Daahir Camuud, ayaa sheegay in boliisku is difaacayeen kadib markii dad gadoodsani dhagxaan la dhaceen boliiska oo dhaawaceen sideed boliis.
Weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed Saciid Cige, oo wareystay maanta Cabdi Daahir Camuud oo ah wasiir ku-xigeenka amniga ee Somaliland, ayaa ugu horeyn weydiiyay waxa uu kaga jawaabayo boliiska dad shicib ah oo weliba caruur toogtay